VIDEO-Halis Ka Taagan Gobolka Sool, Shacabka oo Afka Furtay iyo Somaliland oo Gurmad Dalbatay Xilli Dagaal..
March 18, 2019 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Deegaamo katirsan gobolka Sool oo uu gacanta ku hayo maamulka Somaliland ayaa xilligaan waxaa laga soo sheegaya xaalad aad u adag oo sababi karta dhimashada dad iyo duunyo aad u badan.
Xaaladdaan oo ka dhalatay abaarta baahsan ee ka jirta gobolkaasi ayaa waxaa aad uga dayrinaya dadka danyarta iyo reer guuraaga kunool deegaamo badan oo katirsan gobolka Sool lagana waayey baad iyo biyo intaba.
Dhinaca kalena xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa goor dhoweyd war ka soo saartay xaaladda deegaamadeeda waxaana ay sheegtay in dadka iyo dalka Soomaaliland ay galeen xaalad deg deg ah.
Somaliland ayaa sheegtay inay soo wajahday cabsi ku aadan xaaladda abaareen iyo biyo la’aanta baahsan ee ka taagan deegaamadeeda, waxaana ay sheegtay inay jiraan deegaamo ay macquul tahay in biyo la’aan loogu dhinto.
Deegaamo badan oo ka mid ah dhulka Somalida ayaa waxaa xilligaan ka taagan abaar baahsan kadib markii ay daba dheeraatay diraacdii xilli deegaamada qaar aysan helin xilli roobaadyadii ugu dambeeyey.